porn နှင့်လိင်မှတဆင့်ကူးစက်သောရောဂါပိုးမကူးစက်သူ - ဆုကြေးဖောင်ဒေးရှင်းမှ
ပင်မစာမျက်နှာ porn နှင့်လိင်မှတဆင့်ကူးစက်သောရောဂါပိုးမကူးစက်
လိင်မှတဆင့်ကူးစက်သောရောဂါကူးစက်မှု (ကာလသား)လည်းအဖြစ်ရည်ညွှန်း လိင်မှတဆင့်ကူးစက်သောရောဂါများ (STD) နှင့် သျှင်ရောဂါများ (VD), လေ့လိင်, အထူးသဖြင့်အင်္ဂါဇာတ်လိင်ဆက်ဆံမှု, စအိုလိင်ဆက်ဆံနှင့်ခံတွင်းလိင်အားဖြင့်ပြန့်နှံ့လျက်ရှိသောရောဂါကူးစက်မှုဖြစ်ကြသည်။ အများစုမှာအက်စ်တီအိုင်စပိုင်းတွင်ရောဂါလက္ခဏာတွေဖြစ်ပေါ်စေပါဘူး။ ဤသည်အခြားသူများအပေါ်ရောဂါဖြတ်သန်းတစ်ဦးထက် သာ. ကြီးမြတ်သောအန္တရာယ်အတွက်ရလဒ်များ။
ပထမ၊ သင်သည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုခြင်းနှင့်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းများကိုကြည့်ရှုနေသော်လည်းမည်သူမဆိုနှင့်လိင်မဆက်ဆံလျှင်၊ ဒါကလုံးဝမှန်တယ်၊ ဒါပေမယ့်ဇာတ်လမ်းတစ်ခုလုံးမဟုတ်ဘူး။ သင်ရောဂါကူးစက်ခံရခြင်းထက်သင်ယူခြင်းခံရသည့်ကျန်းမာရေးပြproblemsနာများအတွက်သင်အားနည်းနေဆဲဖြစ်သည်။ သင်သည်ယောက်ျားတစ် ဦး ဖြစ်ပါကညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်သင်သည်ညစ်ညမ်းစေသော erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု (PIED)၊ anorgasmia သို့မဟုတ်နှောင့်နှေးသည့်သန္ဓေတည်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ရေရှည်ပြproblemsနာများနှင့်ရင်ဆိုင်နေရဆဲဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်သည်အမျိုးသမီးတစ် ဦး ဖြစ်ပါကသင်၏ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကြည့်ရှုခြင်းကသင်၏ခန္ဓာကိုယ်ကိုလိင်ကစားစရာများသို့မဟုတ်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းများကိုနှစ်သက်သောမိတ်ဆွေများနှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာရင်းနှီးမှုထက်ပိုလေ့ကျင့်ရန်ဖြစ်နိုင်သည်။ ပြင်းထန်သောညစ်ညမ်းစောင့်ကြည့်သူများသည်အားကစားမှားခြင်းအတွက်ကိုယ်ထိလက်ရောက်လေ့ကျင့်နေကြသည်။
ဒုတိယအချက်မှာ porn ကိုကြည့်ခြင်းဖြင့်, သင်စိတ်ပိုင်းသင်သည် porn အတွက်တွေ့မြင်သောအရာကိုပြန်လုပ်ချင်မှသင့်ရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဦးစားပေးလေ့ကျင့်နေကြသည်။ အသုံးအများဆုံး porn ကွန်ဒုံး-အခမဲ့ဇုန်ဖြစ်ပါတယ်ရှုမြင်ကြသည်။ ဤသည်မှာပါးစပ်လိင်ဆက်ဆံတဲ့အခါမှာလိင်ဆက်ဆံမှုသို့မဟုတ်ပါးစပ်တွင်းရေကာတာကဲ့သို့သောအခြားရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအတားအဆီးများများအတွက်ကွန်ဒုံးကိုလျစ်လျူရှုဖို့သငျ့စိတျထဲမှာအလိုဆန္ဒထသတ်မှတ်။
ထိုကဲ့သို့သောကွန်ဒုံး, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမိတ်ဖက်တစ်ဦးသေးငယ်အရေအတွက်ကိုရှိခြင်းနှင့်လူတစ်ဦးချင်းစီကိုသာစွန့်စားမှုလျော့ကျကိုလည်းအခြားနဲ့အတူလိင်ရှိပါတယ်တဲ့ဆက်ဆံရေးအတွက်ဖြစ်ခြင်း၏အသုံးပြုမှုကိုအဖြစ်ပိုမိုလုံခြုံလိင်အလေ့အကျင့်။ အကြီးမားဆုံးလူသတ်သမားများ HIV နှင့် HPV ပိုးဖြစ်ကြသည်။ ဤတွင်ထိုသူတို့နှင့် ပတ်သက်. အချို့သောအခြေခံသတင်းအချက်အလက်ဖြစ်ပါတယ်။
လူ့ immunodeficiency virus ကို (HIV ပိုး) အကြောင်းတရားများ HIV ပိုးကူးစက်မှုကို နှင့်အချိန်ကျော် ဝယ်ယူ immunodeficiency syndrome ရောဂါ (အေအိုင်ဒီအက်စ်) ။ HIV ပိုးကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့အားဖြင့်ကူးစက်ရောဂါများ၏စာရင်းအပေါ်အရေအတွက်ကို2အဆင့်, ကမ္ဘာဂြိုဟ်ပေါ်တွင်အများဆုံးသေစေနိုင်သောရောဂါများထဲကတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ 2014 အတွက်ကအကြောင်း 1.4 လူဦးရေသန်းသေဆုံးပြီးအကြောင်းကို 35 သန်းအခြားလူများကအသကျရှငျခဲ့ကြသည်။ ယူအက်စ်အေခုနှစ်တွင်သန်း 1.1 အကြောင်းကိုလူများကအများရှိသော်လည်း, အကြောင်းကိုတဦးတည်း-In-ရှစ်သိကြပါဘူး, သူတို့ကိုရောဂါထုတ်လွှင်၏စည်းကမ်းချက်များ၌အလွန်မြင့်မားအန္တရာယ်အောင်။
လူ့ Papilomavirus သို့မဟုတ် HPV ပိုးခံတွင်း, လိင်အင်္ဂါ, သားအိမ်ခေါင်းနဲ့စအိုနဲ့တူကိုယ်ခန္ဓာ၏အသားအရေများနှင့်စိုစွတ်သောမျက်နှာပြင်များကူးစက်မယ့်သေးငယ်တဲ့အရွယ်အစား DNA ကိုဗိုင်းရပ်စ်ပိုးဖြစ်ပါတယ်။ HPV ပိုး၏ 100 ထက်ပိုမိုကွဲပြားခြားနားသောမျိုးရှိပါတယ်။ အသုံးအများဆုံးအမျိုးအစားတွေကိုအရေပြားပေါ်တွင်တွေ့ရှိခဲ့နှင့်လက်ပေါ်တွင်တွေ့မြင်ကြွက်နို့အဖြစ်ပေါ်လာကြသည်။ တချို့က HPV ပိုးအမျိုးအစားများကိုလည်းယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်း၏လိင်အင်္ဂါဒေသများကူးစက်။ လိင်အင်္ဂါ HPV ပိုးကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်အမေရိကန်နှင့်များတွင်အသုံးအများဆုံးလိင်မှတဆင့်ကူးစက်သောရောဂါကူးစက်ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါလိင်အင်္ဂါဒေသများထိခိုက်စေနိုင်သည်ကိုကအနည်းဆုံး 40 HPV ပိုးမျိုးရှိပါတယ်။ ထိုအထဲကတချို့ဟာ "အနိမ့်အန္တရာယ်" ဖြစ်ကြောင်းနှင့် "High-အန္တရာယ်" အမျိုးအစားများအနေဖြင့်လိင်အင်္ဂါကြွက်နို့လိင်အင်္ဂါကင်ဆာသားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာသို့မဟုတ်အခြားအမျိုးအစားများကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။ high-အန္တရာယ် HPV ပိုးအမျိုးအစားများကိုလည်းအမေရိကန်နှင့်ဥရောပ၌ သာ. ဘုံဖြစ်လာသော oropharyngeal ကင်ဆာဟုခေါ်တွင်လည်ချောင်းကင်ဆာပုံစံ, ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။
HPV ပိုးဗိုင်းရပ်စ်ရှည်လိင်အင်္ဂါဧရိယာ၌ပစ္စုပ္ပန်ဖြစ်ရန်နှင့်သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာ, vulvar, penile နှင့် anogenital ကင်ဆာ၏သိသာထင်ရှားသောအကြောင်းရင်းဖြစ်လူသိများခဲ့ကြသည်။ ဒါဟာ oropharynx ကင်ဆာတစ်ဦးပိုမိုမြင့်မားမှုနှုန်းအတွက်ရရှိလာတဲ့, ဦးခေါင်းနှင့်လည်ပင်းဒေသတွင်း၌ HPV ပိုးစာချုပ်ချုပ်ကြသည်လူများတစ်ခုတိုးလာအရေအတွက်ကိုမျိုးစုံမိတ်ဖက်တွေနဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုထဲမှာပါဝငျနှင့်ခံတွင်းလိင်အလေ့အကျင့်အတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံဖြစ်ကြောင်းယုံကြည်သည်နှင့်ရလဒ်အဖြစ်ဖြစ်ပါတယ်။ HPV ပိုးမှတစ်ဦးကအသေးစိတ်မိတ်ဆက်တွေ့နိုင်ပါသည် ဒီမှာ.
အဲဒီမှာဆိုးဝါးရောဂါများဖြစ်လျော့နည်းများပါတယ်သောအခြားအက်စ်တီအိုင်အများကြီးရှိပါတယ်, ဒါပေမဲ့သူတို့သင်၏ကျန်းမာရေးများအတွက်နေဆဲမကောင်းတဲ့ဖြစ်ကြသည်။ ဒါဟာတစ်စုံတစ်ဦးတစ်ဦးရောဂါပေးစေခြင်းငှါကောင်းတဲ့စိတ်ကူးဘယ်တော့မှပါ!
Glasgow ငါတို့သည်အကြံပြု Sandyfordလည်းမှတဆင့်လိင်တူချစ်သူနှင့် bi ယောက်ျားတို့အတွက်အထူးကုဝန်ဆောင်မှုများကိုကမ်းလှမ်းရာ စတိဗ် Retson စီမံကိန်း။ Edinburgh အတွက် go-မှလူမျိုးဖြစ်ကြ၏ Lothian လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေး.